China Tilapia Hove Collagen Peptide fekitori uye vanotengesa | Huayan
Kuwedzera kune yekutanga-kirasi michina, yakagadziridzwa mbishi zvinhu uye zvemhando yepamusoro tekinoroji, kambani inokoshesa kukosha kwehunhu kudzora uye manejimendi mune yese nzira yekugadzira, uye inovavarira kuwana zvakanakisa mune ese ma link kuona mhando yezvokupedzisira zvigadzirwa.
Hove collagen peptide, collagen inodzorwa pasi pemorekuru uremu 1000-3000 Dalton neasidhi-base uye enzyme maitiro ekugaya. Inonzi diki mamorekuru peptide. Peptide zvinhu zviri pakati peamino acids uye macro-molecule mapuroteni. Akawanda mapepeptidi akapeta kuti aumbe protein molecule. Peptides ndiwo chaiwo mapuroteni zvidimbu. Morekuru rayo rinongova nanometer muhukuru. Gastrointestine, ropa reropa uye ganda zviri nyore kupinza, uye mwero wayo wekutora wakakwira zvakanyanya kupfuura uya wemaprotein macromolecule.
Kwayaka: Tilapia ganda kana zviyero zve tilapia
Kurema kwemorekuru: 1000-3000DA, 500-1000DA, 300-500DA.
Nyika: upfu, granule
Ruvara: Ichena kana yakajeka yero; mhinduro yacho haina ruvara kana yero yero
Ravidza uye nekunhuwa: Nezvakagadzirwa zvakasarudzika kuravira uye kunhuwa
Molecular Kurema: 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal
Mapuroteni: ≥ 90%
Maitiro: High protein, hapana chinowedzera, isiri-yakasviba
(1) Collagen inogona kuchengetedza ganda, kuita kuti ganda riite nyore;
(2) Collagen inogona kuchengetedza ziso, kuita cornea yakajeka;
(3) Collagen inogona kuita kuti mapfupa ave akaomarara uye asachinjike, kwete akasununguka asina kusimba;
(4) Collagen inogona kukurudzira mhasuru yemaseru kubatana uye kuita kuti ive inochinja uye kubwinya;
(5) Collagen inogona kuchengetedza nekusimbisa viscera;
(6) Collagen inewo mamwe mabasa akakosha: Kuvandudza immune, inhibiting maseru ekenza, shandisa maseru mashandiro, homeostasis, ita mashandiro, kurapa arthritis uye kurwadziwa, kudzivirira kukwegura kweganda, kubvisa kuunyana.
(1) cosmetic additives idiki mamorekuru uremu, inopinza nyore. Ine huwandu hukuru hwemapoka ehydrophilic, akanakisa hunyoro zvinhu uye zviyero hunyoro hweganda, Inobatsira kubvisa ruvara rwakakomberedza maziso neacne, chengetedza ganda chena uye kunyorova, kutandara uye zvichingodaro.
(2) Collagen inogona kushandiswa sekudya zvine hutano; inogona kudzivirira chirwere chemwoyo;
(3) Collagen inogona kushanda sechikafu checalcium;
(4) Collagen inogona kushandiswa seyakawedzera chikafu;
(5) Collagen inogona kushandiswa zvakanyanya muchikafu chakaomeswa, zvinwiwa, zvigadzirwa zvemukaka, zviwitsi, makeke zvichingodaro.
Pashure: Hove dzeMarine Oligopeptide
Zvadaro: Oyster Peptide